२७ फाल्गुन, २०७६ – Mero UK
Day: २७ फाल्गुन, २०७६
२७ फाल्गुन, २०७६ २७ फाल्गुन, २०७६ / अनलाइन खबर
काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२२ र एएफसी एसियन कप २०२३ को संयुक्त छनोट अन्तर्गत अप्रिल र जुनमा हुने खेलहरु स्थगित भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्वकपको एसिया छनोट अन्तर्गतका खेलहरु स्थगित भएको हो । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले एसियाका सदस्य राष्ट्रहरुसँग छलफल गरेपछि मार्च र जुनको …
कोरोनाका कारण विश्वकप छनोटका दुई खेल स्थगित Read More »
हराउँदै बच्चा र हजुरआमालाई जोड्ने ‘लोरी संस्कृति’
बच्चालाई सुताउने बेलामा विभिन्न कथा सुनाउने प्रचलन नेपाली समाजमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै लोरी संस्कृति हराउँदै गएको पाईन्छ । तर, बच्चालाई नीति कथाका मन्त्रहरु पढाउनेदेखि विभिन्न दन्त्य कथा सुनाउने प्रचलन परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको पाइन्छ । जो कोहीको पनि बाल्यकालमा आमा वा हजुरआमाले धेरै लोरी सुनाउने गरेको इतिहास पाइन्छ …
हराउँदै बच्चा र हजुरआमालाई जोड्ने ‘लोरी संस्कृति’ Read More »
अनिच्छित गर्भ रहेपछि
अहिले युवाहरु जति छिटो साथी बनाउँछन्, उति नै छिटो एकआपसमा नजिक हुने गर्छन् । उनीहरु शारीरिक रुपमा एकाकार हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कहिले काहीँ गर्भ रहन सक्छ, जो उनीहरुले चाहेका हुँदैनन् । यसरी रहने गर्भको कारण उनीहरुले ठूलो तनाव झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । भोलिका दिन वदनाम हुने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यतिबेला के गर्ने कसो …
अनिच्छित गर्भ रहेपछि Read More »
बुटवल ब्लास्टर्सले गर्‍यो पेट्रियोटिक र दमकसँग सम्झौता
काठमाडौं । पोखरा प्रिमियर लिगको फ्रेञ्चाइज बुटवल ब्लास्टर्सले युवा क्रिकेटरहरुको विकासलाई लक्षित गर्दै झापाको पेट्रियोटिक क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टर र दमक क्रिकेट क्लबसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अनुसार बुटवलले पेट्रियोटिक र दमकसँग आबद्ध युवा क्रिकेटरहरुलाई आफ्नो प्रशिक्षण शिविरका साथै हाई पर्फर्मेन्स क्याम्पमा पनि सहभागी गराउने छ । यस्तै पेट्रियोटिक र दमकका खेलाडीहरुले बुटवलको लोगो आफूले …
बुटवल ब्लास्टर्सले गर्‍यो पेट्रियोटिक र दमकसँग सम्झौता Read More »
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ सर्दा पूजा र पललाई कती घाटा ?
कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै असर नपुर्याएको भए, शुक्रबारटबाट नायक पल शाह र नायिका पूजा शर्माले अभिनय गरेको चलचित्र ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’लाई दर्शकले हेर्न पाउथ्य । तर, कोरोनाको त्राससँगै नेपालमा पनि जमघट र भेला नगर्न सरकारले आग्रह गरेसँगै ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’को निर्माणपक्षले चलचित्रलाई अनिश्चितकालका लागि पछि सार्ने निर्णय गर्यो । चलचित्रको रिलिज …
‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ सर्दा पूजा र पललाई कती घाटा ? Read More »
कसरी तयार गर्ने सुपाच्य, स्वादिलो र स्वस्थकर खाना ?
जब तपाईं स्वास्थ्यप्रति सर्तक रहनुहुन्छ, तपाईंको थालमा स्वस्थ्यकर भोजन समावेश हुनेछ । त्यही भोजन हाम्रो लागि विष बन्छ र त्यही भोजन हाम्रो लागि अमृत बन्छ । कस्तो खानपान गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराले यो निर्धारण गर्छ । त्यसैले खाना खाइरहँदा आफ्ना थालमा त्यही परिकार समावेश गरौं, » पुरा समाचार पढ्नुहोस